Apple maseva anosaina zvekare shanduro dzekare dzeIOS 11, tinogona kudzikisira kubva kuIOS 11 | IPhone nhau
UPDATE: Zvinotaridza kuti Apple yatanga kuvhara mukana wekusaina vhezheni ye pre-iOS 11 mune mamwe mamodheru
Apple yarasikirwa nenzira yayo. Zvinetso zvebhatiri, izvo zviri kuzokonzeresa huwandu hwakawanda hwezvinetso zveiyo Cupertino-based kambani, vanga vari mukufamba kwekupedzisira uko inotiratidza kuti chimwe chinhu chakakanganisika sei neApple.
Mukufamba izvo Apple zvisati zvazivisa, uye sezvatinoona muIPSW.me, Apple inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi kubva kune iPhone 5 mukana wekudzikisira kuIOS 6.1.3, pachinhu ichi chaizvo.
Muchiitiko chese ari maviri iPhone 6, 6s uye 7, Apple inotibvumidza kudzikisira kuIOS 10.2, ingori vhezheni pamberi pekuunzwa kweshanduko mukutungamira kwekushanda kweprosesa kana bhatiri risiri mumamiriro. Sezvakaitika mwedzi mishoma yapfuura apo Apple yakabvumidza chete iyo iPhone 10s kudzikisirwa kune iOS 6, kambani haina kuita chero chirevo chepamutemo. Iyo iPhone 6s yaive imwe yematemu, mushure mekumisikidzwa kweIOS 11, iyo yaitaridza kuita kwakaipisisa uye vazhinji uye vazhinji vashandisi vairatidza kusagadzikana kwavo nezvazvo.
Hatizive kana raive dambudziko nemaseva, chirwere chakavapunyuka, uye chingave chikonzero nei kambani yaTim Cook yabvumidza zvakare zvishandiso zvese kudzikiswa, kutanga neiyo iPhone 5, uye zvingangoita kuti hatife takazviziva, kubvira Pangosvika mukana uyu wavhurwa, unogona kuvharwa nekukasira.
Kana iwe uchishuva kugona kudzikisira chishandiso chako, sezvo iOS 11 yakaburitswa, usatora nguva yakareba, nekuti kana iri yekupedzisira bhagi, Apple ichaivhara nekukurumidza sezvazvinogona kudzivirira zviteshi kubva pakuramba zvichinakidzwa neshanduro dzakapfuura, uye nekudaro, shanduro dzejerebreak dzakaburitswa kusvika parinhasi.
Kuti uwane dzokera kushanduro isati yasvika iOS 10, isu tinofanirwa kushanyira webhusaiti IPSW.me uye download iOS vhezheni yatinoda kuisa pane yedu kifaa. Kana tangozvirodha pasi, tinofanirwa kuenda kuTunes tinya bhatani reKutsvaga Gadziriso tichimanikidza bhatani reShift paPC kana kiyi yeOption kana tikazviita kubva kuMac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple maseva anosaina zvekare shanduro dzekare dzeIOS 11, tinogona kudzikisira kubva kuIOS 11
Tingaite sei kuziva kusvika kune iyo vhezheni yatinogona Kudzikisa?
Mune yangu kesi, semuenzaniso, ini ndoda kuzviita pane iyo iPad Mini. Pane nzira yekuziva here?
En http://www.ipsw.me unogona kuzviona, iwe unofanirwa kusarudza iPad uye tinya pane yako modhi.
uye zvingaitwe sei nekuti mu iphone 6 haibvumidze kuzviita
Mhoro shamwari, iwe paunopinda iro peji uye woisa modhi yako, akati wandei firmware inobuda, nekuti iwo ane X ndiwo iwo ausingakwanise kuisa. Zvinotaridza kuti yaive kukanganisa kweApple uye vakatobvisa, saka isu takaita sepakutanga. Kwaziso
Izvo hazvichaendi zvema6
Ivo havasisiri kushanda futi, vakarega kusaina pa iPhone 6
Antonio José Masiá akadaro
Uye zvakadii nezveWatch OS? Inofanira kukwanisa kuita futi. Kana uchigadzirisa kuIOS 11 zvaive zvakare zvakakosha kugadzirisa iyo OS yeWatch ...
Anoshungurudza sei machinda, ini ndinotanga nzira yekudzikisa ma6 kubva pa11.2.5 kusvika pa10.3.3 uye parizvino pavanomira kusaina, chihure chakazara ...
Zvinoshamisa. Ndinovimba ichashanda kuitira kuti mune ramangwana varege ivo vasarudze sisitimu yekugara nayo ...
Hazvishande ini ndangoedza uye pa iPhone 6 inopa kukanganisa
Ini ndangoedza uye pa iphone 6 uye ios 10.3.3 hazvishande
John jhorman akadaro
manyepo akachena haachashandisi apuro yakarohwa
Pindura Jhonn Jhorman
Hutsva hwehupfumi hweApple muUK iyo ichafanirwa kubhadhara 136 mamirioni mapaundi